Sideen U Bilaabaa? | The Seattle Public Library
Soomaali : Sideen U Bilaabaa?
(How do I get started?)
Kaalay oo qaado karka maktabada! Waan dhib yaraynay! Ku Buuxi dalabka karka Maktabada afkaaga oo maantaba qaado karka Maktabada oo bilaash ah. Haddii aad ku nooshahay, ka shaqayso ama ka dukaansato Degmada King (jiidda adeegayada), waxaad u qalantaa kaar bilaash ah.
Ma hubo waxa ay Maktabadu hayso? Markaad soo dhexgasho Maktabada, calaamadahayaga ayaa kaa gargaari doona meesha aad aadayso. Shaqaalahayaga ayaa u heelan inay ku gargaaraan. Ama fiiri buuga tusmada Maktabada ee Internetka. Waxa ku taxan wax kasta oo yaal. Waxaan haynaa in ku dhaw ilaa 2,000,000 oo shay (walax)!
Ma rabtaa inaad Kaydsan buug adoo gurigaaaga jooga? Haddii buuga aad rabtaa maqan yahay, waa ka sii kaydsan kartaa internetka ama haddii aad soo wacdo laanta xaafadaada ama Borrower Services Department (Waaxda Adeegyada Daynsiga) ee 206-386-4190. Waxaad u baahan tahay lambarka karka Maktabada. Badi waxyaabaha aad rabtid waxa la geyn karaa goobta laantu ku taal si aad uga qaadato laanta kuugu sahlan.
Markaad hesho alaabta aad rabtay waa inaad sajisho inaad la baxayso. Ama tus qof shaqaale ah oo kaa gargaara ama isticmaal saldhigayadada sahlan ee “self-check out” (iskaa isu-adeega ah).
Marka ay taagan tahay wakhtigii la soo celin lahaa shay, waxaad isticmaali kartaa mid ka mid ah “bookdrops” (meesha buugta lagu rido) oo laga helo dhamaan qaybooyinka maktabada. Waxay furan yihiin 24 saac maalintii.
Maxaa yaalo oo laga qaban karaa maktabada?
(What is there to do at the Library?)
Miyaad rabtaa inaad kombuyuutar ku isticmaasho Maktabada? Si aad u fiiriso emailka ama u isticmaasho Internetka sagaashan daqiiqo maalin kasta goob kasta adoo wata kaarkaaga maktabada PIN (Lambarka Aqoonsiga Qofka). Ama, aad u soo qaadato laabtobkaaga…dhamaan goobaha maktabaduhu waxay leeyihiin khad bilaa xadhig ah.
Ma rabtaa inaad barato sida loo isticmaalo kombuyuutar? La isku qoro cashar kombuyuutarka.
Ku raaxaysato akhris? Isticmaal kaatalooga maktabada ee internetka si aad u raadiso buugaag, aflaam iyo muusig Soomaali ah. Ama na warso…waxaanu kaa gargaari karnaa helitaanka waxyaabaha ay rabaan dhamaan qoyskaagu!
Ma rabtaa inaad la socoto dalkaagii hooyo ama ka gargaarto caruurtaada barashada dhaqankooda asalka ah iyo afkooda hooyo? Ka akhri internetka wargaysyada daafaha adduunka oo dhan, qaado muusig, aflaam ama buugaag ku sa’absan dalkaagii.
Sii baro Maktabada
Sharciga dhaqanka maktabada (Rules of Conduct): in maktabada nadiif ahaato, ayna nabadgalyo ahaato
Maktabadu baraafadkaaga way tixgalisaa. (Confidentiality Policy)